Marriott na ndị ozi nwere ụlọ nkwari akụ ọhụrụ na India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives na Nepal
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Marriott na ndị ozi nwere ụlọ nkwari akụ ọhụrụ na India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives na Nepal
Marriott International kwupụtara taa na ọ bịanyela aka na nkwekọrịta ụlọ nkwari akụ ọhụrụ 22 na South Asia-nke gụnyere India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives na Nepal-n'ime ọnwa iri na asatọ gara aga, na-atụ anya ịgbakwunye ihe karịrị ụlọ 18 na Pọtụfoliyo ya na-eto ngwa ngwa.
Marriott International dị ugbu a bụ ụlọ nkwari akụ nwere ọnụ ụlọ kachasị na mpaghara South Asia ma na -atụ anya na ọ ga -aga n'ihu na -eto nke ọma site na mbinye aka ọhụrụ ndị a.
"N'ime afọ a na -atụghị anya ya nke ukwuu, mbinye aka ndị a bụ ihe akaebe maka nkwụsi ike na ike Marriott International n'ịkwalite uto siri ike n'ime ọdịdị ọbịa nke na -aga n'ihu na -aga n'ihu," kwuru. Rajeev Menon - Onye isi ala Asia Pacific (ewezuga China Ukwu), Marriott International. “Ọ bụ akara nke ntụkwasị obi sitere n'aka ndị nwe anyị na franchise ndị bụ akụkụ dị mkpa na njem uto anyị. Anyị nwere ekele maka nkwado na ntụkwasị obi ha na -aga n'ihu n'ike ụdị anyị ka anyị na -aga n'ihu nabata ndị njem. "
"Mbinye aka ndị a na -eme ka nkwenye anyị na South Asia dị ka mpaghara nwere ike dị elu ebe anyị na -aga n'ihu na -eto ma na -etinye aka na ndị ahịa na -agbasawanye site na iwebata ọtụtụ ụdị Marriott na ahụmịhe pụrụ iche na ebe ndị na -atọ ụtọ," Kiran Andicot - Onye isi oche mpaghara mmepe, South Asia, Marriott International. "Anyị na -atụ anya mmeghe ụlọ nkwari akụ ọhụrụ ndị a n'ọdịnihu yana inyocha ohere mmepe n'ọdịnihu na mpaghara niile."
Ọchịchọ onye nwe maka ụdị okomoko
Ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọrụ ọhụrụ e binyere aka na South Asia n'ime ọnwa iri na asatọ gara aga gụnyere ụlọ oriri na nkwari akụ na okomoko, nwere ụdị dị ka JW Marriott na W Hotels. Nke a na -egosipụta agụụ na -arịwanye elu nke ndị njem maka ihe eji enyere ndụ aka na ọmarịcha ihe. Ndị njem nwere ike ịtụ anya mpụta mbụ nke akara W Hotels na Jaipur W Jaipur na 2024. Ozugbo emepere ya, ụlọ nkwari akụ ahụ na -atụ anya imebi ụkpụrụ nke okomoko ọdịnala site na ọrụ nnọchi anya ya, ike na -efe efe, na ahụmịhe ọhụrụ. Gbanyere na ọdịmma zuru oke, akụrụngwa JW Marriott na-enye ogige a haziri iji nye ndị ọbịa ohere ilekwasị anya na inwe mmetụta zuru oke-dị ugbu a n'uche, na-eriju afọ na ahụ, ma na-eme ka mmụọ dị ọhụrụ. Na -atụ anya mpụta gafee ọtụtụ ebe pụrụ iche n'ime South Asia n'ime afọ ise na -abịanụ, ndị njem nwere ike na -atụ anya JW Marriott Ranthambore Resort & Spa nke dị n'otu ebe nchekwa anụ ọhịa ndị ama ama na India, Ogige Ntụrụndụ Ranthambore; JW Marriott Chennai ECR Resort & Spa na ụsọ oké osimiri ndịda India mara mma; JW Marriott Agra Resort & Spa n'ala TAJ MAHAL; na mpụta mbụ nke akara JW Marriott na Goa na Shimla - abụọ n'ime ebe ama ama ama ama India - na JW Marriott Goa kwuru na JW Marriott Shimla Resort & Spa.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ JW Marriott Bhutan, Thimphu A na -atụ anya akara akara mpụta mbụ nke JW Marriott na Bhutan, a na -atụ anya imeghe na 2025 wee nye ahụmịhe ọgwụgwọ nke na -eme mmụọ udo nke ala ahụ.
Maldives na -atụ anya ụlọ nkwari akụ JW Marriott nke abụọ ya na 2025, mgbe JW Marriott Resort & Spa, Embhoodhoo Finolhu - South Male Atoll a na -atụ anya na ọ ga -egosipụta ọmarịcha ụlọ 80 ọdọ mmiri. Mbinye aka a na-esote Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, na-ewusi akara ukwu Marriott na ebe ntụrụndụ ama ama.
Họrọ ụdịdị Gaa n'ihu na -eto Uto
Ejikọtara ụdị dị ka Ogige site Marriott, Fairfield nke Marriott, Isi anọ site na Sheraton, Aloft Hotels na Moxy Hotels, ụdị nhọrọ Marriott na -aga n'ihu na -emegharị na South Asia na -anọchite anya ihe karịrị pasent 40 nke iri abụọ na abụọ ụlọ ọrụ nkwari akụ ọhụrụ 22. Akara Moxy, nke amaara maka ahụmịhe ya, ụdị egwuregwu ya na ọnụahịa ọnụ ahịa a pụrụ ịbịaru nso, ga -amalite na India na Nepal. Moxy Mumbai Andheri West na 2023 na Moxy Kathmandu na 2025
Ahịa ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ka na -elekwasị anya maka Marriott International dị n'India, na -eme ka ndị nwe ya na ndị njem na -achọsi ike. Ezubere maka onye ọchụnta ego ọgbara ọhụrụ, Ogige Marriott na Fairfield site na ụdị Marriott na -agba mbọ maka ọrụ ọbịa dị nkọ ma na -eche echiche, agbanyeghị ebumnuche njem ha. Site na nkwekọrịta ndị bịanyere aka na nso nso a, Ogige Marriott na -atụ anya ịgbakwunye ihe ọhụrụ ise na Pọtụfoliyo na -arụ ọrụ nke ụlọ oriri iri abụọ n'ofe South Asia. A na-atụ anya ka anọ n'ime ihe ndị a mepee n'ime afọ ise na-abịanụ, ọ ga-adịkwa n'ahịa ahịa ọkwa ọkwa abụọ n'ime India: Ogige nke Marriott Gorakhpur dere; Ogige nke Marriott Tiruchirappalli dere; Ogige nke Marriott Goa Arpora dere; na Ogige nke Marriott Ranchi dere. Fairfield na -atụ anya ịgbakwunye ihe ọhụrụ abụọ na Jaipur. Na Sri Lanka, na Ogige nke Marriott Colombo dere na -atụ anya akara akara mpụta mbụ nke ogige dị na mba ahụ, nke akwadoro imepe na 2022.
Ngwaahịa adịchaghị mma na -agbaze ụkwụ ha
A na -atụ anya ịkwalite uto nke ụdị adịchaghị adị na South Asia, ndị bịanyere aka n'akwụkwọ nso nso a gụnyere Katra Marriott Resort & Spa na India na mba Le Meridien Kathmandu, nke a na -atụ anya na ọ ga -abụ mpụta mbụ nke akara Le Meridien na Nepal. Ọzọkwa, ihe Hotel Bhaluka Marriott na -atụ anya akara mbata nke akara Marriott Hotels na Bangladesh, nke a na -atụ anya imeghe na 2024.
Marriott International nọ n'ọkwa dị mma na South Asia yana ụlọ oriri na ọ operatingụ 135ụ 16 na-arụ ọrụ gafee ụdị XNUMX dị iche iche na mba ise, iji nye ahụmịhe dị iche na mpaghara ndị njem. Ụdị ndị na-arụ ọrụ ugbu a na South Asia gụnyere: JW Marriott, St. Regis, The Ritz-Carlton, W Hotels, na The Luxury Collection na ngalaba okomoko; Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Pọtụfoliyo ụtụ, Le Meridien, Renaissance na Marriott Executive Apartments na ngalaba adịchaghị; Ogige nke Marriott, Isi anọ site na Sheraton, Fairfield nke Marriott na Aloft Hotels, na ngalaba ọrụ ahọpụtara.